‘ब्रिदिङ टेक्निक’ के साँच्चै स्वास्थ्यबर्द्धक हुन्छ? – Health Post Nepal
‘ब्रिदिङ टेक्निक’ के साँच्चै स्वास्थ्यबर्द्धक हुन्छ?
२०७७ साउन ५ गते ९:१०
‘तर उनीहरू उत्तेजित हु“दै ‘कस्तो वाहियात! ठग!’ भन्दथे,’ डोलान सुरुवाती दिन सम्झन्छन्।
तर, समयक्रमस“गै ट्याक्सी चालक तथा अन्य मानिसहरूको उनीप्रतिको स्वभाव एवं प्रतिक्रियामा परिवर्तन आयो।